Izindaba - Ukuhalalisela okufudumele ku-SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD ngena ocwaningweni lwezitifiketi ze-FSC futhi ivunyelwe isitifiketi esisha se-FSC.
Ukuhalalisela okufudumele ku-SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD ngena ekucwaningweni kwamabhuku kwezitifiketi ze-FSC futhi kuvunyelwe isitifiketi esisha se-FSC.
Siyakuhalalisela ngemfudumalo ISHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD dlula ekucwaningweni kwezitifiketi kwehlathi le-FSC futhi uvunyelwe ukuthola isitifiketi esisha se-FSC.
Ukuqinisekiswa kwehlathi, okwaziwa nangokuthi isitifiketi sokhuni, kuyithuluzi lokusebenzisa izindlela zemakethe ukukhuthaza ukuphathwa kwehlathi okusimeme nokufeza izinhloso zemvelo, ezenhlalo nezomnotho. Ngokwesitifiketi sehlathi, umuntu angathuthukisa indawo yokuthuthukiswa kwamabhizinisi ngokwawo, okunye ukukhulisa inzuzo yokuncintisana, ngokuqinisa ukuphathwa okuyisisekelo nokuphathwa kwemvelo kwamabhizinisi ukugcina noma ukukhulisa isabelo semakethe, ngenkathi ukwazi ukukhiqiza imikhiqizo ehlukanisiwe, okwesithathu ukuthuthukisa isithombe senhlalo yamabhizinisi, ukusiza amabhizinisi ukukhulisa iziteshi zamazwe omhlaba, ukuthola ukwesekwa okwengeziwe, kanti okwesine, ukuqinisa ukuphathwa okuyisisekelo nokuphathwa kwemvelo kwamabhizinisi.
ISHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD injengefemu eqinisekisiwe ye-FSC iminyaka engaphezu kwengu-9.
Ukutholwa ngempumelelo kwesitifiketi sesitifiketi se-FSC kusho ukuthi inkampani isidlulise imigomo namazinga wezinto ezithinta ezemvelo, ezenhlalo nezomnotho ezibekwe yi-FSC, yafaka isitokwe esihle ekuthengisweni kwezinto, ithenge izinto zokusetshenziswa ezinophawu lwesitifiketi se-FSC, gwema ukuthenga imikhiqizo esihlahleni esisengozini izinhlobo noma ukugawulwa ngokungemthetho, futhi uqinisekise abathengi ukuthi imikhiqizo ivela emahlathini ahlangabezana nezidingo zenhlalo, ezomnotho nezemvelo zesizukulwane samanje nesizayo, futhi futhi isekela iGreenpeace.
Isikhathi eside, ISHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD ukunamathela kumqondo wokwenza imikhiqizo yezinkuni ibe nobungani bemvelo, imvelo, inempilo, imikhiqizo yayo nekhwalithi yayo enhle kakhulu kanye nensizakalo enhle, ethandwa ngamakhasimende ethu.
Ngokuzayo, inkampani izothuthukisa ngamandla imbangela yokuvikelwa kwemvelo okuluhlaza, ukuze ukuvikelwa kwemvelo kunikele ngamandla abo.
Uchungechunge lwenkampani lokuqondisa luhlanganisa uhla oluphelele lwemikhiqizo, imikhiqizo ithengiswa ekhaya nakwamanye amazwe ngasikhathi sinye.
Njengomnikazi wesitifiketi se-FSC, Samukela bonke abangane bethu namakhasimende emhlabeni wonke ukubheka isitifiketi sethu se-FSC kuwebhusayithi esemthethweni ye-FSC: http://info.fsc.org/.